Inqubo yokufaka isicelo semali – Natal Joint Municipal Pension/Provident Funds
/ Inqubo yokufaka isicelo semali
Umhlomulo womasingcwabisane ukhokha isamba semali uma kukhona oshonayo ukusiza ezindlekweni zomngcwabo.
Ulwazi olunikeziwe luzosiza ukwazi indlela yokufaka isicelo semali kanye namaphepha adingekayo ukuthola isamba semali yomhlomulo kulabo abasulayo, ukuxoshwa, ukuphela komsebenzi, ukugula, ukusheshe uthathe umhlalaphansi singakafiki isikhathi kanye nokuthatha umhlalaphansi okujwayelekile.
ISikhwama singabamba imali ethile kwimihlomulo yamalungu ngokweMigomo yeSigaba 37C kanye no 37D we-Pension Fund Act:-Imalimboleko yezezindlu engakaqedwa ukukhokhwa ezikhungweni zemali kanye nemali okufanele ikhokhelwe uMasipala olahlekelwe ngokukhwabanisa kanye nama-Court Orders.
Amaphepha adingekayo ngaphambi kokuthi iSikhwama siqale ukubala umhlomulo welungu:
Ukwazi ngomhlomulo welungu
Ikhophi egxiviziwe yaqinisekiswa ye-ID
ISitatimende saseBhange esigxiviziwe (esingesidala ukudlula izinyanga ezintathu)
Ifomu eligcwaliswe ngokuphelele
Uma udivosa, lolu lwazi olungezansi lukunikeza izinto ezibalulekile ezidingekayo.La maphepha alandelayo kufanele ahanjiswe eSikhwameni uma kudivoswa:
· Iphepha ledivosi kufanele lisho igama lesikhwama ilunga lelo elikusona;
KwaZulu-Natal Joint Municipal Pension Fund (Superannuation), noma;
KwaZulu-Natal Joint Municipal Pension Fund (Retirement), noma;
· Ikhophi egxiviziwe yesivumelwano sokudivosa (uma kube nesivumelwano)
· Ikhophi egxiviziwe ye-ID.
Kufanele sithole la maphepha abhalwe ngezansi kunkosikazi/kumkhwenyana ongelona ilunga:
· Ikhophi egxiviziwe ye-ID kanye nesitifiketi somshado.
· Ikhophi yesitatimende sasebhange enesitembu sebhange.
· Inombolo yentela.
· Ifomu kankosikazi/kamkhwenyana yesicelo semali.
Isikhwama esibhalisiwe singabamba nanoma imalini kumhlomulo okukhulunywa ngawo welunga ngokuhambisana ne-Income Tax Act, 1962 (Act 58 of 1962). Kubalulekile kumalunga ukuthi aqaphele ukuthi kunemithelela yentela emihlomulweni eyisamba semali ngokulandela umhlahlandlela we-SARS.
Ingxenye evunyelwe u-SARS ukuthi ingabanjwa intela emalini yoMhlalaphansi ewu-R500,000.00, ukusula emsebenzini kanye nokuxoshwa iwu R25,000.00.
Uma sewutholile kwa-SARS ukuthi uzokhokha malini yentela, inzalo yakwa-SARS iyobalwa emhlomulweni ogcwele kusukela ngosuku lokuphuma kuya osukwini lokukhokhelwa bese emva kwalokho intela iyobanjwa esambeni somhlomulo.